Sale ny sary ao amin'ny Internet - vola Online — Photo-Sales.com
Shutterstock (Ho an’ny mpaka sary)
Ankehitriny aho dia te-hiresaka momba ny fomba fitadiavam-bola an-tserasera amin’ny alalan’ny fivarotana sary ao amin’ny sary boloky hazo.
Photo banky dia vohikala amin’ny alalan’ny izay mivarotra mpaka sary maro ny sary.
Mpaka sary mampiseho ny asa ho an’ny mpanjifa. Ny mpanjifa no afa-po ny rehetra dia manaiky:
– Eny ary, ny zava-drehetra toa hankasitrahana!
– Tsara, mandoa $ 100.
Mpanjifa, manome vola, “manantena aho raha toa ka dia hozahan-toetra mila, dia azo atao ny miresaka aminao? Tsy loatra fa indray mandeha atao sy manadino? ”
– Mazava ho azy fa miankina amin’ny zavatra sy ny fomba fanitsiana.
– Mazava ho azy! Tsy hoe: “Aoka ny manova ny zava-drehetra!”
– Tsisy olana. Marihina fa fotoana iray hafa. Moa ve aho avy eo, raha tampoka aho lany ny vola na drafitra vaovao mba hanontany anao ny mandoa kely momba ny vola? Izy io dia hamaivanina, mila tena mahalana aho, Mino aho fa tsy mampaninona.
– Aza manahy! Tsy handeha aho ho avy any aminareo hoe: “Aloavy ahy indray!” 😉
Mety hiteny ianao hoe tsy hitranga.
Na izany aza, dia azo atao ny imbetsaka hivarotra ny sary sy ny fandraisam-bola ho azy ireo indray ho tsy manam-petra ny fotoana.
Noho izany antony izany tranonkala manokana – photobank, marina kokoa, microstock.
Izany dia fitambarana sary goavana voaaron’ny copyright.
Amin’ny ny fototry, ny mpanelanelana eo mpividy sy ny mpaka sary sary. Ary ny teo anelanelan’ny mpanoratra sy ny mpividy ny fitaovana hafa.
Mpividy sary ireo tonian-dahatsoratra, tompon’ny toerana, endrika, izay mila sary.
Ny fampiasana ny olona hafa ny sary avy amin’ny hetsika ara-dalàna Internet atahorana ho fanaovana tsinontsinona ny zon’ny mpamorona. Tokony na hividy ny zo hampiasa sary na manakarama ny mpaka sary na sary ny tenanao.
Toa sarotra izany? Rehefa misy olona nila ny sary, matetika mihevitra fa ampy ny hividy fakan-tsary, ary manao ny irina sary.
Raha nividy sodina, dia manana ny sodina. Raha nividy ilay fakan-tsary, ianao – ny mpaka sary
Voalohany indrindra, nahoana no mividy fitaovana fakan-tsary sy ny hafa vitsivitsy ny poa-basy? Na dia noho ny am-polony vitsivitsy na an-jatony ny sary.
Faharoa, manao sary tsara, tsy ny rehetra afaka.
Miezaka ny hitifitra sarin’ireo tenanao, nisy nanao hoe:
– Afaka manimba rantsan-tànany ny tsirairay!
– Tsy maintsy manana Tompo any karate?
– Mpaka sary aho! : D
Afaka manakarama mpaka sary matihanina ho an’ny vola fa tsy mahita ny vokatry mialoha.
Na izany aza, dia mora kokoa ny mividy sary masoivoho dolara ny maro ny anankiray, nifidy azy ireo avy any an-tapitrisany sary faran’izay tsara.
Vola avo mpaka sary eo amin’ny fivarotana ny sary ho tanteraka noho ny hoe isaky ny sary azo amidy imbetsaka sy mandrakizay.
Photo banky manao asa manaraka ireto:
Sale ny sary. Sary rehetra dia zaraina momba lohateny. Sary tsirairay dia niaraka tamin’ny famaritana sy ny lisitry ny teny fanalahidy. Photobanks nanorina-in fikarohana sary itadiavana mifototra amin’ny teny fanalahidy. Misy rafitra billing ny mandray vola avy amin’ny mpividy sy ny sary ho an’ny vola mpaka sary.
Sale ny horonan-tsary, sary, Vector sary, mipipy-horonantsary, noraisim-peo.
Online vola ho an’ny mpaka sary, mpanakanto, illustrators, videographers sy ny hafa.
Fiarovana ny zon’ny mpamorona ny sary sy ny fanazavana zon’ny mpamorona.
Miantoka ny ara-dalàna ny fampiasana sary mpividy.
maritrano sary lafika sary fiaviana tsara tarehy hoso-doko hatsaran-tarehy hoso-doko manga sary trano sary loko clipart Crimea sary kolontsaina fanoharana andro sary tontolo iainana sary Eoropa HD malaza wallpaper HD ala sary zaridaina HD maitso ny wallpapers colina sary tantara kanto trano fanoharana tontolo sary ravina fanoharana tendrombohitra pics voajanahary toetra antitra sary ivelan'ny trano sary any an-tokotany sary HD Park sary HD fototra sary zavamaniry temotra vatolampy sary sehatra fanoharana ranomasina wallpaper HD vanim-potoana lanitra fanoharana vato temotra fahavaratra sary HD fizahan-tany wallpaper HD tilikambo ny wallpapers milamina wallpaper HD Travel wallpaper HD hazo clipart View temotra rano temotra
© Copyright 8th of December 2019 20:09:53 All rights reserved Photo-Sales.com.